အရမ်းတန်ခိုးကြီးတဲ့ အင်းတော်ကြီး၏ အံ့ဘွယ် ကိုးပါး - Barnyar Barnyar
အင်းတော် ကြီးသည် မြန်မာ ပြည်တွင် အကြီးဆုံး အင်းဖြစ်သည်။
ဥတ္တရ စောဖြူမင်း၏ ပျောက်ဆုံး နေသော ရွှေမြို့တော်၏ တည်နေရာသည် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် (ကမ္ဘာ့) မြေပုံ အရ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် (၉၆ံ ၂၃`နှင့် ၉၇ံ) ကြားတွင် လည်းကောင်း၊ မြောက်လတ္တီတွဒ် (၂၅ံ နှင့် ၂၆ံ) ကြားတွင် လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ (အထက်) မြောက်ပိုင်း (ကချင် ပြည်နယ် မိုးညှင်းမြို့နယ်) တွင် တည်ရှိ နေသည်။
“၁” . အလျား ၈-တိုင်၊ အနံ ၄-တိုင်၊ ကျယ်ဝန်း သောကြောင့် တပါး၊
“၂” . အနောဒတ္ထ အိုင်ကဲ့သို့ အလွန် ရေသန့်ရှင်း သောကြောင့် တပါး၊
“၃” . အလွန် ကျယ်ဝန်းသော အင်းဖြစ် သော်လည်း အင်းထဲတွင် ဆိုးဝါးသော မိကျောင်း စသော ငါးကြီးတို့ကို မဆိုးဝါး ရအောင် အင်းတော်ကြီး အရှင် ထိန်းသိမ်း ခြင်းကြောင့် အံ့ဘွယ် တပါး၊
“၄” . အင်းကြီးထဲတွင် မတော်တဆ လူတို့ကျ သေဆုံးရသော်လည်း အနာ အဆာ မရှိ ငါးကြီး များလည်း မစားဘဲ ကမ်းစပ်ရောက်အောင် လိူင်းပုတ်ခတ် တင်ပေးခြင်း၊
“၅” . အင်းနားတွင် ရွှေကျင်သော် ရွှေများရရှိခြင်း၊
“၆” . အမိုက်သရိုက် များကို အင်းထဲတွင် မရှိရအောင် နေ့စဉ် ညတိုင်း ကမ်းသို့ အရောက် လှိုင်းပုတ်ခတ် တင်ပေးခြင်း၊
“၇” . တစ်နှစ် သုံးကြိမ်ကျ သားမက်တော် နန့်တိန်း အရှင်ကြီးက ယောက္ခမတော် အရှင်ကြီးထံသို့ ရေပြောင်းပြန် ဆန်တက် ကန်တော့ခြင်း၊
“၈” . စစ်တိုက်ရာပါ ချောင်းများကို အင်းကြီးထဲသို့ သန့်ရှင်းစွာ ၀င်ခွင့် ပြုခြင်း၊
“၉” . နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း တန်ဆောင်မုန်း လက စ၍ ပြာသိုလ အထိ အင်းထဲရှိ ငါးများကို အင်းတော်ကြီး တောင်ပိုင်း အခြားအကွာ (၈) မိုင်ဘုရားကြီး အထိ လွဲအိမ်တောင် အရှင်ကြီးက ဆေးခတ်သဖြင့် ငါးများစွာ သေခြင်း ဤသို့ဖြင့် အံ့ဘွယ် ကိုးပါးတည်း၊
အင်းတော်ကြီး အိုင်သည် ယေဘုယျ ခေါ်ဝေါ် အဆိုပြု ကြသည့် အကျယ်အ၀န်း ပမာဏမှာ အလျား-၁၆မိုင်၊ အနံ-၈ မိုင် ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ သို့ရာတွင် မြန်မာ့ စွယ်စုံကျမ်း၌ အကြီးဆုံးသော အင်းသည် အလျား-၁၄မိုင်၊ အနံ-ရမိုင်ရှိသော အင်းသည် မိုးကောင်း ချောင်းဖျား ခံရာ၌ ရှိပေသည်ဟု ဆိုလေသည်။ မျက်မှောက် ကာလ အတွေးခေါ် မြော်မြင်ရေး (သမိုင်းဗေဒ ကို ဆန့်ကျင်၍) ယုတ္တိဗေဒ ညာရှင် တချို့က ဆိုလေသည်။
သမိုင်း ဆိုသည် အငြင်းပွားမှု လမ်းကြောင်းကို ဖြတ်သန်းလာ စမြဲဖြစ်သည်။ မြေဆီလွာ ပြတ်ရွှေ့ခြင်းကြောင့် သော် လည်းကောင်း၊ သဘာဝ တောတောင် ရေမြေ တို့၏ ဖြစ်ပျက် ပြောင်းလည်းခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း မည်တို့ ပင်ဖြစ်စေ ကာမူ ထူးဆန်း အံ့သြဖွယ်ရာများ ဖြင့်ပြည့်စုံ နေသော အင်းကြီး။ ထိုအင်းကြီးသည် အလယ်တွင် ရွှေမဉ္စူ စေတီတော် (ရေလယ်ဘုရား) တည်ထား ကိုးကွယ် ကြသည်။
ဤ ရွှေမဉ္စူ စေတီတော် (ရေလယ်ဘုရား) သည် ဥတ္တရ စောဖြူမင်း၏ ပျောက်ဆုံး နေသော ရွှေမြို့တော်၏ တည်နေရာ ဖြစ်သလို သျှမ်းနီ လူမျိုး “တိုင်းခမ်းတီး၊ တိုင်းလျှဲန်၊ တိုင်းကတူး၊ တိုင်းကနန်း တို့၏ သမိုင်းဝင် ထင်ပေါ် ကျော်စော တန်းခိုးကြီး သော စေတီတော် ဘုရား တဆူ ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြ လိုက်ရ ပါသည်။
အရမျးတနျခိုးကွီးတဲ့ အငျးတျောကွီး၏ အံ့ဘှယျ ကိုးပါး
အငျးတျော ကွီးသညျ မွနျမာ ပွညျတှငျ အကွီးဆုံး အငျးဖွဈသညျ။
ဥတ်တရ စောဖွူမငျး၏ ပြောကျဆုံး နသေော ရှမွေို့တျော၏ တညျနရောသညျ ပွညျထောငျစု မွနျမာနိုငျငံတျော (ကမ်ဘာ့) မွပေုံ အရ အရှလေ့ောငျဂြီတှဒျ (၉၆ံ ၂၃`နှငျ့ ၉ရံ) ကွားတှငျ လညျးကောငျး၊ မွောကျလတ်တီတှဒျ (၂၅ံ နှငျ့ ၂၆ံ) ကွားတှငျ လညျးကောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံ (အထကျ) မွောကျပိုငျး (ကခငျြ ပွညျနယျ မိုးညှငျးမွို့နယျ) တှငျ တညျရှိ နသေညျ။
“၁” . အလြား ၈-တိုငျ၊ အနံ ၄-တိုငျ၊ ကယျြဝနျး သောကွောငျ့ တပါး၊
“၂” . အနောဒတ်ထ အိုငျကဲ့သို့ အလှနျ ရသေနျ့ရှငျး သောကွောငျ့ တပါး၊
“၃” . အလှနျ ကယျြဝနျးသော အငျးဖွဈ သျောလညျး အငျးထဲတှငျ ဆိုးဝါးသော မိကြောငျး စသော ငါးကွီးတို့ကို မဆိုးဝါး ရအောငျ အငျးတျောကွီး အရှငျ ထိနျးသိမျး ခွငျးကွောငျ့ အံ့ဘှယျ တပါး၊
“၄” . အငျးကွီးထဲတှငျ မတျောတဆ လူတို့ကြ သဆေုံးရသျောလညျး အနာ အဆာ မရှိ ငါးကွီး မြားလညျး မစားဘဲ ကမျးစပျရောကျအောငျ လိူငျးပုတျခတျ တငျပေးခွငျး၊
“၅” . အငျးနားတှငျ ရှကေငျြသျော ရှမြေားရရှိခွငျး၊
“၆” . အမိုကျသရိုကျ မြားကို အငျးထဲတှငျ မရှိရအောငျ နစေ့ဉျ ညတိုငျး ကမျးသို့ အရောကျ လှိုငျးပုတျခတျ တငျပေးခွငျး၊
“၇” . တဈနှဈ သုံးကွိမျကြ သားမကျတျော နနျ့တိနျး အရှငျကွီးက ယောက်ခမတျော အရှငျကွီးထံသို့ ရပွေောငျးပွနျ ဆနျတကျ ကနျတော့ခွငျး၊
“၈” . စဈတိုကျရာပါ ခြောငျးမြားကို အငျးကွီးထဲသို့ သနျ့ရှငျးစှာ ဝငျခှငျ့ ပွုခွငျး၊
“၉” . နှဈစဉျ နှဈတိုငျး တနျဆောငျမုနျး လက စ၍ ပွာသိုလ အထိ အငျးထဲရှိ
အိပ်ကပ်ထဲ ပိုက်ဆံပြတ်လျှင် ဆန်စေ့အနည်းငယ် ဆောင်..
Hits Today : 9123
Total Hits : 318831